ZBN Nitrogen generator - China Hangzhou midi Air Ngokwahlukana Izinsiza kusebenza
Isimiso of PSA ingcindezi jika adsorption nitrogen ukwenza umshini Hangzhou midi imishini emoyeni ngokwahlukana yokukhiqiza Co., Ltd. kusekelwe isimiso ingcindezi jika adsorption, usebenzisa izinga okusezingeni carbon ziye ngapha nangapha ngesisefo yamangqamuzana njengenhlangano adsorbent, ngaphansi kwengcindezi ethile, ukukhiqizwa kwanoma nitrogen emoyeni. Ngemva ukuhlanzwa owomile emoyeni onomfutho, ukucindezela adsorption futhi desorption e cleaner adsorber. Ngenxa umphumela sokunciphisa umoya lapho zindiza, umoya-mpilo okusheshayo izinga ku-carbon sie yamangqamuzana ...
Isimiso of PSA ingcindezi jika adsorption nitrogen ukwenza umshini
Hangzhou midi imishini emoyeni ngokwahlukana yokukhiqiza Co., Ltd. kusekelwe isimiso ingcindezi jika adsorption, usebenzisa izinga okusezingeni carbon ziye ngapha nangapha ngesisefo yamangqamuzana njengenhlangano adsorbent, ngaphansi kwengcindezi ethile, ukukhiqizwa kwe-nitrogen emoyeni. Ngemva ukuhlanzwa owomile emoyeni onomfutho, ukucindezela adsorption futhi desorption e cleaner adsorber. Ngenxa umphumela sokunciphisa umoya lapho zindiza, umoya-mpilo okusheshayo izinga ku-carbon ziye ngapha nangapha ngesisefo yamangqamuzana inkulu kakhulu kunangendlela ukuthi nitrogen, futhi umoya-mpilo ngokuncanyelwayo adsorbed yi-carbon ziye ngapha nangapha ngesisefo yamangqamuzana nitrogen is ahlanganiswe esigabeni igesi. Bese ingcindezi lancipha ingcindezi evamile, kanye adsorbent ukuthi enamathiselwe oxygen nezinye amanyela. Izilungiselelo ezijwayelekile ohlelweni imibhoshongo ezimbili adsorption, omunye umbhoshongo nitrogen adsorption umthamo, omunye umbhoshongo desorption kokuzalwa ngokusebenzisa PLC Uhlelo isilawuli ukulawula gas valve ukuvulwa kanye lokuvala, ukuze umjikelezo zakhiwo ezimbili, ukuze kuzuzwe ukukhiqizwa esiqhubekayo eliphezulu nitrogen izinjongo. Lonke uhlelo siqukethe le izingxenye ezilandelayo: onomfutho emoyeni uhlanzekile module, isitoreji emoyeni ithangi, umoya-mpilo-nitrogen kudivayisi ngokuhlukana, nitrogen sesikhana tank.
1, umoya onomfutho izingxenye uhlanzekile
I compressor emoyeni ukunikeza umoya onomfutho lokuqala ukudlula phakathi onomfutho izingxenye emoyeni zokuhlanjululwa, umoya onomfutho kusukela lemifanekiso ipayipi ukususa iningi uwoyela, amanzi, uthuli, nqabela dryer kwalokho okunye amanzi, namafutha amahle lemifanekiso, uthuli, futhi kulandelwe e ultra ngokunemba isihlungi zokuhlanzwa ezijulile. Ngokusho isimo uhlelo, uhlelo emoyeni ukwehlukana emoyeni yakhelwe iqoqo onomfutho uwoyela emoyeni nokususa kudivayisi, esetshenziselwa ukuvimbela ukuthi kungenzeka micro Ukungena uwoyela livikele ngokwanele ukuze carbon ziye ngapha nangapha ngesisefo yamangqamuzana ezinto eziphilayo. umklamo okuqinile izingxenye emoyeni uhlanzekile ukuqinisekisa impilo inkonzo carbon ziye ngapha nangapha ngesisefo yamangqamuzana ezinto eziphilayo. Ngemva kokuthola ukwelashelwa i-ingxenye, emoyeni ahlanzekile ingasetshenziswa ithuluzi emoyeni.
22, isitoreji emoyeni ethangini
Ethangini emoyeni ukunciphisa ukugeleza okusizwa ukushaya, sesikhashana; ngaleyo ndlela kuncishiswe ukuguquguquka ingcindezi ohlelweni, ukuze umoya onomfutho ngokushelela ngokusebenzisa onomfutho izingxenye emoyeni zokuhlanjululwa, ukuze ususe ngokugcwele ukungcola kwamanzi, ukunciphisa okwalandela PSA umoya-mpilo-nitrogen ngokwahlukana iyunithi umthwalo. Ngesikhathi esifanayo, embhoshongweni ukumuncwa ukushintshela, futhi inikeza isikhathi esifushane ngokushesha zokuthuthukisa i-inani elikhulu lomoya onomfutho for PSA-mpilo kudivayisi nitrogen uhlukana adsorption umbhoshongo ingcindezi ngokushesha ifike ingcindezi yomsebenzi, ukuqinisekisa imishini okuthembekile futhi operation esitebeleni.
3, umoya-mpilo, i-nitrogen kudivayisi ngokwahlukana
Umbhoshongo adsorption ne-carbon ekhethekile ngesihlungo yamangqamuzana kuyinto A no B. Lapho umoya ohlanzekile onomfutho ingena itheku Umbhoshongo futhi odabula carbon ziye ngapha nangapha ngesisefo yamangqamuzana kuze kube sekupheleni uphuma khona, O2, CO2 kanye H2O kukhona adsorbed, kanye negesi nitrogen Kwaphuma kusukela ekupheleni esidayisa basembhoshongweni adsorption. Ngemva kwesikhathi esithile, i-carbon yamangqamuzana ngesihlungo adsorption umbhoshongo A. Ngalesi sikhathi, Umbhoshongo stop othomathikhi adsorption, onomfutho komoya ishayisa isakhiwo B ekukhiqizeni umoya-mpilo nitrogen, futhi Umbhoshongo yamangqamuzana ngesihlungo ukuvuselelwa. I ukukhishwa ngesihlungo yamangqamuzana is ezalethwa ekwehleleni okusheshayo umbhoshongo adsorption kuya umfutho womoya ukususa adsorbed O2, CO2 kanye H2O. Amabili amakholomu abangu yanjalo adsorbed kutsha ukuqedela ngokuhlukana oksijini nitrogen, kanye okukhipha okuqhubekayo nitrogen. Inqubo ngenhla ilawulwa ehlelwe logic isilawuli (PLC). Lapho ukuphela esidayisa of ubumsulwa usayizi nitrogen isethi value, uhlelo PLC, othomathikhi ukuzwakalisa valve ivulekile, le elingagunyaziwe othomathikhi nitrogen bethulula, ukuqinisekisa ukuthi elingagunyaziwe nitrogen igesi akusho agobhoze. I ukuzwakalisa igesi uma usebenzisa umsindo injini okokunciphisa umsindo lingaphansi kuka 75dBA.
4, i-nitrogen sesikhana tank
I-nitrogen sesikhana tank isetshenziselwa silinganisa ingcindezi futhi ukuhlanzeka nitrogen uhlukane nitrogen uhlelo umoya-mpilo ngokwahlukana ukuqinisekisa ukulokhu nitrogen esitebeleni. Ngesikhathi esifanayo, embhoshongweni ukumuncwa ukushintshela, it kuthanda uqobo ingxenye igesi lokukhokhisa adsorption umbhoshongo, ukumuncwa umbhoshongo esandleni usizo umfutho, kodwa nazo zinendima ethile ekuvikeleni embhedeni, bafeza indima ebaluleke kakhulu inqubo imishini elisizayo enqubeni umsebenzi.
Inkomba Technical nitrogen ukwenza umshini:
Flow: 3-1000Nm / h Uhlanzekile: 95% -99,9995%
Iphuzu namazolo: esingaphansi -40 DEG C: ingcindezi adjustable lingaphansi kuka 0.6Mpa
izici Technical nitrogen ukwenza umshini
1 ezinengqondo izingxenye zangaphakathi, ukusatshalaliswa air ukufana, ukunciphisa umthelela ijubane eliphezulu emoyeni.
2 ngcono inqubo design, ukusetshenziswa imiphumela emihle kakhulu.
3 esiyingqayizivele yamangqamuzana zokuvikela ngesihlungo ukunweba ukuphila carbon ziye ngapha nangapha ngesisefo yamangqamuzana ezinto eziphilayo.
4 ezihlakaniphile kuncike nitrogen elingagunyaziwe imishini igesi ukuqinisekisa izinga umkhiqizo.
5 ozikhethela nitrogen ukugeleza rate, othomathikhi uhlelo lokulawula, elawulwa kude uhlelo.
6 lula ukusebenza, operation esitebeleni, izinga eliphakeme ezishintshayo, ingafinyelela operation unmanned.
Ububanzi kwesicelo nitrogen ukwenza umshini:
ukwelashwa ukushisa Metal inqubo igesi zokuzivikela, nitrogen igesi kanye nezinhlobo ezahlukene amathangi, umkhakha chemical wegesi zokuhlanjululwa, iraba, imikhiqizo plastic yokukhiqiza, ukudla umkhakha qeda-mpilo fresh-ngokugcina emabhokisini isiphuzo embonini bayigubungele igesi zokuhlanjululwa, ezithaka imithi umkhakha nitrogen nitrogen icala emaphaketheni kanye esitsheni-mpilo qeda, zikagesi futhi ukukhiqizwa electronic inqubo Semiconductor umkhakha negesi zokuzivikela. Ubumsulwa, ukugeleza nokucindezelwa kungase kushintshwe ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezahlukene.
Previous: VPSA Umshini Oxygen generator
Okulandelayo: ZBO Oxygen generator
Isitsha Igesi Yemvelo Generator
Luhlala Isikhathi Eside Oxygen Generator
Negesi Generator Plant
Isibhedlela Oxygen Generator
Igesi Yemvelo Generator Power Plant
Igesi Yemvelo Generator Setha
Nitrogen Generator Nitrogen negesi Plant
Oxygen negesi Generator
Plant Power Generator Igesi Yemvelo
Ephathekayo Oxygen Generator
Producer negesi Engine Generator
VPSA cleaner ingcindezi jika adsorption Tec ...
Ubuchwepheshe zokukhiqiza hydrogen esuka kimi ...
inqubo Dry desulphurization ubuchwepheshe
Psa decarbonization ubuchwepheshe
I-carbon monoxide uhlanzekile ubuchwepheshe